Ahoana ny fomba hampihenana ny haben'ny horonantsary iray: alternatives hanaovana azy | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 01/09/2021 18:20 | Nohavaozina amin'ny 01/09/2021 18:22 | maro
Alao an-tsaina hoe vao nahavita horonan-tsary mahafinaritra ianao. Ny olana dia mavesatra loatra izy, ary manakana anao tsy ho afaka mandefa azy io, na koa mandika izany amin'ny fitaovana hafa. Manao? Ny ilainao dia ahenao ny haben'ny horonan-tsary, ary ho an'izay dia manana fitaovana maro hanatanterahana azy ianao.
Raha efa sendra an'ity olana ity ianao ary sarotra ny mitady ny vahaolana, eto izahay dia manamboatra tranokala, rindranasa ary programa izay afaka manampy anao hampihena mora ny haben'ny horonan-tsary iray, mamehy ary tsy manary kalitao. Azonao atao ny manandrana safidy maromaro mandra-pahitanao ilay mety indrindra amin'ny tetikasanao.
1 Maninona no ahena ny haben'ny horonan-tsary
2 Moa ve mampihena ny kalitaony ny fihenan'ny habe?
3 Fomba hampihenana ny haben'ny horonan-tsary
3.2 VLC, iray amin'ireo programa tsara indrindra hampihenana ny haben'ny horonan-tsary
Maninona no ahena ny haben'ny horonan-tsary
Alao an-tsaina hoe tsy maintsy mandefa video amin'ny mpiara-miasa ianao. Na mpanjifa. Miezaka mametaka azy ianao fa milaza aminao ny mailaka fa lehibe loatra izy io. Noho izany, mila mampiasa tranokala iray ahafahanao mampakatra ilay horonantsary ianao avy eo manome ny rohy mankany amin'io olona io. Mila misintona azy ianao vao afaka mahita azy. Midika izany fa mila mampiasa solosaina ianao satria mety tsy manana toerana hahitana azy amin'ny finday.
Ho famaranana, ianao dia mametra ny safidin'io olona io hijerena ilay video ary satria lehibe kokoa noho ny tokony ho izy izany. Noho izany, hisorohana an'io olana io sy hanamora ny fanaovana ilay olon-kafa, maninona raha ahena ny haben'ny horonantsary?
Raha ny marina, ny fanaovana azy hatramin'ny voalohany miaraka amin'ny programa (azonao atao ny mamorona rakitra miaraka amin'ilay horonan-tsary izay mitana habe kely ary iray hafa misy maro hafa) dia ho mora kokoa aza. Ohatra, ny fandraketana azy amin'ny endrika MP4, izay iray amin'ireo compresses tsara indrindra, tsy dia mavesatra ary manerantany.
Moa ve mampihena ny kalitaony ny fihenan'ny habe?
Maro ny programa sy pejy web milaza aminao fa afaka mamehy horonantsary izy ireo ary tsy hahafoana kalitao izany. Fa ny marina dia tsy marina izany. Tokony ho fantatrao fa ny vidéo iray dia mihena ny kalitao rehefa mamehy azy, satria izay atao mba hahatonga azy io tsy dia mavesatra loatra "Esory ny faritra tsy hitan'ny mason'ny olombelona" ary miaraka aminy dia misy kalitao azo tratrarina.
Ratsy noho izany ny tianao holazaina? Tsy voatery. Miankina amin'ny fitaovana ampiasainao, mety ho kely dia kely ny fihenan'ny kalitao, ary mety tsy hitanao akory. Fa tsikaritra kokoa izany raha toa ka horonan-tsary lehibe izy io ary nahena ho antsasany na latsaka.
Fomba hampihenana ny haben'ny horonan-tsary
Fantatrao izao ny antony tsara, na torohevitra, hanerena ny haben'ny horonan-tsary, fotoana tokony hanomezanao safidy vitsivitsy hahatratrarana azy. Ny marina dia mifototra amin'ny roa ihany ireo: ny fampiasana programa na fampiasana fitaovana an-tserasera, na pejy web na programa an-tserasera izay tsy mila mametraka na inona na inona.
Amin'ity tranga faharoa ity dia ilaina ny manisy kajy ny karazana horonan-tsary tianao hovaina. Raha horonan-tsary mila filaminana tsara izy io, dia tsy tianao ho eo amin'ny tambajotra sns. Avy eo dia mety hampidi-doza ny safidy an-tserasera satria mampiasa fitaovan'ny antoko fahatelo ianao ary, raha tsy fantatrao tsara izay hatao amin'ireo rakitra izay ampakarina dia tsy tsara izany. Ankehitriny, raha matoky azy ianao dia tohizo, satria hisoroka ny tsy hitrandrahana toerana ianao rehefa mametraka programa.
Ary inona avy ireo fitaovana hampihenana ny haben'ny horonantsary atolotray anay? Ity, ity manaraka ity:
Ity dia iray amin'ireo programa malaza indrindra amin'ny fampihenana ny haben'ny horonan-tsary. Raha ny marina dia hamela anao hiasa bebe kokoa ho an'ny horonan-tsary ianao, toy ny fanovana ny horonan-tsary ho endrika hafa.
Ny tombony ananany dia izany miasa amin'ny 4K.
Na dia misy kinova maimaimpoana aza, ny marina dia raha te hampiasa azy 100% ianao dia tsy maintsy mandoa izany. Ary ho an'ny Mac sy Windows ihany no anananao fa tsy an'ny Linux.
VLC, iray amin'ireo programa tsara indrindra hampihenana ny haben'ny horonan-tsary
Ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireo mpamorona sy mpamorona horonantsary. Fantatra erak'izao tontolo izao ary tsy vitan'ny hoe manana ny azo atao ny mamehy ny horonantsary Afaka manao zavatra hafa koa ianao (manatsara ny kalitaon'ny sary, vokatra, sns.).
Maninona izahay no manome sosokevitra an'ity programa ity? Eny, satria io no iray amin'ireo tsara indrindra hampijanonana ny fahaverezan'ny kalitao. Amin'ny maha programmer matihanina anao, andramo atao ny manala ny angon-drakitra rehefa manery kely ny horonantsary araka izay tratra mba tsy ho tsikaritra.
Amin'ity tranga ity, toy ny nitranga tamin'i Movavi, dia hahita karazana programa roa ianao: ny iray maimaim-poana, voafetra amin'ny fiasa azonao tanterahina miaraka aminy; ary ny fandoavana. Ny olana dia, amin'ny iray maimaim-poana, dia ho hitanao izany ampio mari-drano amin'ny horonan-tsary, izay mety tsy tianao (na dia hampiseho amin'ny mpanjifa ny endrik'ilay horonan-tsary aza izany dia tsy hevitra ratsy izany).
Izy io dia manana fiasa maro ary hamela anao hanova ny toetran'ny horonan-tsary, manapaka azy, mametraka azy, mamorona iray avy amin'ny rangotra, sns.
Amin'ity tranga ity dia tsy miresaka momba programa iray izahay fa momba ny pejin-tranonkala iray azonao ampiasaina hampihenana ny haben'ny horonan-tsary. Ny tokony hataonao dia ny mampakatra ny horonan-tsary amin'ny pejy, miandry azy handefasana 100% ary aorian'ny fihenan'ny habeny dia ampidinoo indray ao amin'ny kinova vaovao.
Azonao atao ny manindry ny lalao hijerena ny endriny ary raha io no tadiavinao (tsy dia misy fatiantoka kalitao).
Ity tranonkala ity, avy amin'ny Movavi, dia mety ho safidy iray hafa. Ary io dia avy amin'ny iray amin'ireo fandaharana kalitao avo indrindra ho an'ny horonan-tsary, fantatrao fa ho safidy tsara izany. Mbola mila mampakatra ilay video amin'ny Internet ianao, amin'ny mpizara azy, ary rehefa vitanao izany dia hiteny aminao izy ny karazana famatrarana azo tanterahina, avo, antonony na ambany, ary koa ny lanjany azo amin'izy ireo.
Vantany vao misafidy ianao dia tsy maintsy miandry kely ny fanodinana ilay horonantsary, avy eo ampidino izany ary zahao amin'ny solosainao hoe nanao ahoana ny vokany.
Betsaka ny safidy azo isafidianana hampihenana ny haben'ny horonan-tsary. Mamporisika izay ampiasainao matetika ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fampihenana ny haben'ny horonantsary
Safidy tena tsara! Te hilaza aminao fotsiny aho fa misy programa hafa, HandBrake, izay maimaim-poana (Open Source), dia manolotra safidy famerenam-bidy maro ary haingana dia haingana, raha te hijery ianao ary ampidiro ao amin'ilay lisitra;)
Famihina sy fiarahabana ao amin'ny bilaogy, tiako ny atiny!
Banky sary malalaka